SARUDZA MUTAURO Abbey Abkhaz Abui Acholi Afrikaans Albanian Alur Arabic Armenian Assamese Attié Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Boulou Bulgarian Cakchiquel (Central) Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Drehu Dutch Edo Efik Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Gokana Greek Guarani Gujarati Gun Guéré Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Iban Ibanag Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabuverdianu Kabyle Kachin Kannada Kazakh Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Kosraean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Marshallese Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mixe Mizo Mongolian Mutauro Wemasaini wechiQuebec Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuBolivia Mutauro Wemasaini wokuBritain Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuFinland Mutauro Wemasaini wokuHungary Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuJapan Mutauro Wemasaini wokuKorea Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuParaguay Mutauro Wemasaini wokuPeru Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Mutauro Wemasaini wokuZimbabwe Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Southern Greece) Rotuman Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Thai Tiv Tlapanec Tojolabal Tongan Toraja Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Kana ukaratidza zvauri, zvichaita kuti ukwanise kuzvisarudzira zvekuita pane kusarudzirwa nevamwe.
Chimbofungidzira izvi: Mudumbu maBrian munotanga kusunga paanoona vakomana vaviri vaanodzidza navo vachiuya kwaari. Vakatomboedza kumufurira kusvuta fodya kaviri kese vhiki rino. Aka kanenge kava kechitatu.
Mukomana wekutanga anoti:
“Sei uri wega? Imbonzwaka iyi kuti iri sei.”
Anoita kakuchonyera paanenge achiti, “imbonzwaka iyi,” obva abudisa chimwe chinhu muhomwe yake achitambidza Brian.
Brian anoona uri mudzanga wefodya uye anobva awedzera kutya.
“Aiwa shamwari,” Brian anodaro. “Inga wani ndakakuudza kuti handi. . . ”
Mukomana wechipiri anobva ati: “Asi uri kutya?”
Brian anobva azvishingisa oti “Aiwa!”
Mukomana uyu anobva abata Brian papfudzi, otaura zvinyoro-nyoro achiti, “Tora kani.”
Mukomana wekutanga anobva aswededza mudzanga wacho kumeso kwaBrian ozevezera achiti: “Hapana watinomboudza. Hapana anofa akazviziva.”
Dai uriwe Brian waizoita sei?
Shamwari dzaBrian dziri kunyatsoziva here zvadziri kuita, kana kuti kungotevedzerawo vamwe? Dzinenge dziri kungotevedzerawo vamwe. Chii chiri kuita kuti dzidaro? Imhaka yekuti dzinoda kufarirwa.
Kana izvi zvikaitikawo kwauri, ungaitei kuti usafurirwa?
FUNGIDZIRA ZVINOGONA KUITIKA
Kakawanda kacho unogona kuona dambudziko risati raitika. Ngatitii paunenge uchifamba unoona kumberi kwako kuine chikwata chevaunodzidza navo chichisvuta. Kugara wafungidzira zvinogona kuitika kunokubatsira kuti uzive zvekuita.
FUNGA KUTI WOSARUDZA ZVIPI
Bhaibheri rinoti: ‘Iva nehana yakanaka.’—1 Petro 3:16.
Unogona kufarirwa nevamwe kana ukatevedzera zvavanoita. Asi zvibvunze kuti, ‘Kana ndikavatevedzera ndichazonzwa sei nekufamba kwenguva?’ Ungada here kuvanza zvauri kuti ungofadza vaunodzidza navo?—Eksodho 23:2.
Bhaibheri rinoti: ‘Munhu akachenjera anoita zvinhu akangwarira.’—Zvirevo 14:16.
Muupenyu tinototi tisarudze zvekuita uye tinokohwa zvatinenge tadyara. Bhaibheri rinotaura nezvevarume vakasarudza kuita zvakanaka vakadai saJosefa, Jobho, naJesu. Rinotiudzawo nezvaKaini, Isau naJudhasi avo vakasarudza kuita zvakaipa. Ko iwe uchaitawo sei?
Bhaibheri rinoti: “Munhu akatendeka pazvinhu zvidukuduku akatendekawo pazvinhu zvikuru.” (Ruka 16:10) Kana wava kuziva zvinogona kuguma zvaitika, uye wasarudza zvaunoda kuita, zvichakuitira nyore kuudza vamwe uye uchaona kuti zvinobatsira.
Usanetseka, haufaniri hako kuzotaura zvakawanda. Kungovaudza zvakasimba kuti HANDISI KUDA zvakatokwana. Kana kuti unogona kuratidza kuti hausi kuzochinja zvawasarudza nekutaura zvinotevera:
“Itai henyu mega!”
“Handiite zvinhu zvakadaro!”
“Inga mozviziva wani kuti handiite zvakadaro!”
Kuti ukunde unofanira kukurumidza kupindura uchiratidza kuti hausi kutya. Kana ukadaro, uchatoona kuti vachabva vatosiyana newe!
ZVAUNGAITA KANA UCHISEKWA
Kana ukabvuma kufurirwa, vachakuita chidhori chavo
Uchaita sei kana vamwe vako vakakuseka vachiti, “Uri kutyei, asi uri gwara?” Kana ukaona vachidai ziva kuti ndozvinowanzoitika kana vanhu vachida kukufurira. Pane zvinhu zviviri zvaunogona kuita.
Unogona kubvumirana navo. (“Ehe, ndiri kutya!” Ibva wataura chikonzero chako.)
Unogona kutovaomesera. Vaudze kuti uri kurambirei, wobva wataura zvinhu zvinoita kuti vashandise pfungwa. (“Nezvamuri izvi handina kumbofunga kuti mungasvuta!”)
Kana vakaramba vachikunetsa, ibva pavari! Yeuka kuti kana ukaramba uripo, vachawedzera kukunetsa. Kubva pavari kucharatidza kuti haudi kuvatevedzera.
Uchida usingadi uchatosangana nevanhu vanofurira vamwe. Asi unogona kutanga nekusarudza zvauchada kuita, wovaudza zvawasarudza, worega kuchinja. Ndiwe unofanira kuzvisarudzira!—Joshua 24:15.
Zvii zvandiri kuronga kuti ndisazofurirwa?
Kana vamwe vakandifurira kuita zvakaipa ndichaita sei?
Ona vhidhiyo inonzi Ramba Kufurirwa iri pawww.jw.org. (Tarisa pakanzi ZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI > VARI KUYARUKA)